Liva Andriamanantena · Mey 2017 · Global Voices teny Malagasy
Liva Andriamanantena · Mey, 2017
Nanomboka nandika tamin'ny 22 Marsa 2016 · 1936 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Liva Andriamanantena tamin'ny Mey, 2017
Azia Atsimo 31 Mey 2017
Shina: Tandindonin-doza Ny Lemaka
Shina 31 Mey 2017
Mifantoka amin'ny olan'ny tontolo iainana sy ny toetrandro ao Shina ny tranonkala ifandrimbonana vaovao iray antsoina hoe 'China Green' (Shina Maitso). Miresaka ny Lemaka Tibetana ny tetikasa voalohany , izay mampiseho hoe nahoana no mametraka loza mitatao.....
Amerika Latina 30 Mey 2017
Ny Talata, 27 Janoary 2009, namoaka fanambarana an-gazety ny manampahefan'ny Valan-javaboahary Virunga ao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo izay milaza fa nitombo 12.5% ny rajako an-tendrombohitra mahalala baiko na zatra olona ao amin'ny Valan-javaboahary ...
Tonizia: Ary Tratran'ny Sivana I Arabicca!
Nanapa-kevitra hanohy indray ny famahanana bilaogy tamin'ny herinandro lasa ilay bilaogera Toniziana Fatma Arabicca izay voasambotra roa volana lasa izay. Tonga ireo manampahefana nanakana ny lahatsoratra iray monja tao amin'ny bilaoginy vaovao . Naneho hevitra momba ny fandrarana sy ny fanasivanana ireo bilaogy hafa ihany koa ireo bilaogera Toniziana .
Meksika: Ny “Kristalin'ny Lasapely Sixtine”
Amerika Latina 27 Mey 2017
Ahitana kristaly goavam-be fantatra amin'ny anarana hoe "Volana Vato" ny "Lavabato Kristaly" ao an-tanàndehiben'i Naica ao Meksika. Toerana mahafaty ho an'ny fitsidihan'ny olombelona ny lavabato, fa amin'ny alalan'ireo bilaogera amin'ny aterineto kosa no hizarana ny tantara ao ambadiky ity lavabato misitery ity.
Tsy Ho An'ny Toeram-pisakafoanana Fotsiny Intsony ny Maodelin'ny Sakafo Plastika Ao Japana
Azia Atsinanana 27 Mey 2017
"Misy tokoa ve ny olona hiteny hoe: "Oay, tena milay, afaka manaingo ny smartfindaiko amin'ny atodi-trondro aho?" Mino aho fa izaho irery no hanao izany."